मन्टेशरीको दादागिरीः क्रिसमसको दिन सेन्टा-सुट ड्रेस नलगाएको भन्दै विद्यार्थीलाई निकाले ! « NBC KHABAR
मन्टेशरीको दादागिरीः क्रिसमसको दिन सेन्टा-सुट ड्रेस नलगाएको भन्दै विद्यार्थीलाई निकाले !
काठमाडौं । पछिल्लो समयमा बालबालिकाहरुको हेरचाहका साथै लेख पढ सिकाउने मन्टेशरीहरु आफूखुसी बालवालिकाहरुलाई जे पनि सिकाईरहेको गुनासा आइरहेका रहेका छन् । त्यसको एउटा उदाहरण कलंकीको सफल मन्टेशरी प्रि प्राइमरी स्कुल एण्ड ट्रेनिङ सेन्टर बनेको छ ।
उक्त मन्टेशरीले क्रिसमसका दिन क्रिसमस ड्रेस नलगाएको भन्दै एउटा सानी नानिलाई स्कुलबाट निकालेको छ । पवित्रा पन्थीकी सानी छोरीलाई स्कुलबाट यसरी निकालेपछि उनि आफ्नो काममै जान सकिनन् । छारी रुदै घर आएको देखेपछि पवित्रा सीधै हाम्रो कार्यालय आईन् । मन्टेशरी स्कुलका कर्मचारीका अनुसार भने सबै अविभावकलाई अनिवार्य रुपमा सेन्टा सुट लगाउन भनेपनि पवित्रा पन्थीले छोरीलाई नलगाई दिएका कारण स्कुलबाट निकालेको बताए । तर पवित्राले आफुले उक्त जानकारी नै नपाएको भन्दै स्कुलले सानी छोरीलाई त्यस्तो व्यवहार गरेकोमा निकै दुख व्यक्त गरिन् ।
तर पनि मन्टेशरीकी सञ्चालकले भने आफ्नो गल्ती स्वीकार्न तयार छैन् । स्कुलले भनेकाले सेन्टा सुट पनि युनिफर्म जस्तै अनिवार्य भएको बताएछन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका शिक्षा बिभाग प्रमुख सिताराम कोईरालाका अनुसार भने विद्यार्थीलाई उनिहरुको अधिकार विना जवरजस्ती केही कुरा लाद्न मिल्दैन् । हामीले पटक पटक मन्टेस्वरी स्कुलकी प्रिन्सिपल शान्ता गौतमलाई सम्पर्क गर्दा उनले पूरा कुरै नगरी विचमै फोन काटिन् ।